Zanu PF bigwigs threaten orphanage - DailyNews Live
Fungi Kwaramba, CHIEF WRITER • 9 March 2015 12:47PM • 4 comments
HARARE - At least 10 young orphans from Mwenezi District, who were being supported by sacked former minister of State for Masvingo, Kudakwashe Bhasikiti, face a bleak future because Zanu PF hardliners who now control the party want to appropriate the Rutenga house that they are living in.
Efforts to speak to Muzara yesterday were fruitless as his mobile phone was not reachable. But Shumba claimed that Bhasikiti had invaded a farm that was part of Rutenga Rural District council.
There are also threats by some Zanu PF youths to invade former Mashonaland West provincial chairperson Temba Mliswa’s Karoi farm, in a replay of similar recent threats to invade the farm of ousted Zanu PF chairperson for
Mashonaland East province, Ray Kaukonde — where again police had to intervene.
Mabikacheche Tavenganiswa said that Bhasikiti was on the Samuel Undenge, and Kasukuwere, multiple farm owners schedule.
Edwin Guvaza - 9 March 2015
Nhai vanhu Bhasikiti ndoupi?Uya wekunzi akarambidza vaTsvangirai kunosangana nevanhu vanga vawirwa nedembudziko remafashamo emvura kuTokwe -mukosi?saka hanziii hanzi akurambidzwa kuuyawo paophanage home yake?Mati mapurazi kuita sei?Ihhhhhh saka zvinonakira tsoko kana achinyenga sure kwaDhongi ,hino ka Dhongi akazouyawo sure kwashoko otiza achiti kwangu kudoko kwangu kudoko.
Bhasikiti ndiani - 9 March 2015
Ndiye Bhasikiti iyeyo...nhasi zvamuwana, ZANU sinjonjo mwana waamai. Let them f*** each other big time maybe they will learn to respect other humans
Garikayi - 10 March 2015
Heyo ka ZPF yenyu iyo! Bato rizere nevanhu vane hutsinye. Vazhinji vanongotevera vachiwawata kuZPF vachiti ZPF ndeye ropa, ZPF chiwororo until zvavabatabata. Hameno kuti chii chinodhaka pfungwa kuti vanhu vave mamemba ebato iri.